Imibuzo evame ukubuzwa - I-FOSHAN GOODTONE FURNITURE CO., LTD
Ungayitholi impendulo oyifunayo? Sithumele umyalezo ngokusebenzisa ikhasi lethu lokuxhumana nathi.
Ikuphi inkampani yakho? Ungangitshela imininingwane eminingi ngenkampani yakho?
Inkampani yethu nefektri itholakala ku-No. 18 Qiaogao Road, Xiqiao Town, esifundeni saseNanhai, eFoshan, eGuangdong, eChina.
Ifenisha yefenisha ye-Goodtone inikelwe ekukhiqizweni nasekuthekelweni kwefenisha yasehhovisi iminyaka engu-9, iningi lamakhasimende ethu liseYurophu nase-US.
Kungani kungekho amanani akhonjiswa kuwebhusayithi yakho?
Izintengo zethu zingashintsha ngokuya ngokunikezwa nezinye izinto zemakethe. Iwebhusayithi yakwaGootone (www.goodtonechair.com) iwebhusayithi yabakhiqizi eyenzelwe ukukhombisa ukunikezwa komkhiqizo wethu. Uma ufuna ukuthola imininingwane yamanani, unganqikazi ukuxhumana ne-imeyili yethu.
Uyayinikeza insiza ye-ODM?
Uma udinga ukuthi sikhiqize izihlalo ngomklamo owunikezayo, sicela uxhumane nathi ukuze siqhubeke nokuxoxa. Singase futhi sinikeze imibono yokuthuthukisa ukwakheka kwesihlalo.
Siyini isikhathi sewaranti ezihlalweni?
Sinikeza iminyaka engu-5 iwaranti. Kwiwaranti noma cha, kuyisiko lenkampani yethu ukubhekana nokuxazulula zonke izingqinamba zamakhasimende ezenelisa wonke umuntu.
Ungakhokha ku-akhawunti yethu yasebhange:
Impela singanikeza ngemibhalo eminingi kubandakanya Izitifiketi Zokuhlaziywa / Ukuvumelana; Umshuwalense; Umsuka, neminye imibhalo yokuthekelisa lapho kudingeka khona.
Yini ubuncane be-oda lakho?
Sidinga yonke imiyalo yamazwe omhlaba ukuthi ibe nobuningi be-oda obuqhubekayo. Uma ufuna ukuthengisa kabusha kodwa ngamanani amancane kakhulu, sincoma ukuthi uhlole iwebhusayithi yethu.Uma unentshisekelo ngokukhethekile komunye wemikhiqizo yethu, sicela uxhumane nathi ngesikhathi, futhi sizokukhombisa amasampula ethu nokulungiswa komkhiqizo.
Ngingasithola kanjani isampula?
Sicela uthumele isicelo sakho sesampula ngefomu lokubuza.
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi ngithole usihlalo wehhovisi ngemuva kokufaka i-oda?
UFUNA UKUSungula ubudlelwano bebhizinisi nathi?